Mayur Times || मयूर टाइम्स || Authentic news from Nepal, Business Politics Society Art and many more ... » लक डाउनमा भएको अनलाइन क्लास र विद्यार्थीमा परेको प्रभाव – स्वागता सिग्देल
लक डाउनमा भएको अनलाइन क्लास र विद्यार्थीमा परेको प्रभाव – स्वागता सिग्देल
२०७७ साउन २५ गते अाईतबार ०८:२६
चीनको बुहान सहरबाट सुरु भएको कोेरोना भाइरसले यतिवेला विश्वलाई नै चुनौती दिएको छ । विश्वको समृद्धि र सम्पन्नशाली राष्ट्रले समेत यसलाई नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन । कोरोना भाइरसको कारणले विश्वको अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्न सक्ने सम्भावना...
चीनको बुहान सहरबाट सुरु भएको कोेरोना भाइरसले यतिवेला विश्वलाई नै चुनौती दिएको छ । विश्वको समृद्धि र सम्पन्नशाली राष्ट्रले समेत यसलाई नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन । कोरोना भाइरसको कारणले विश्वको अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । चीन लगायत धेरै देशमा कोरोनाको औषधी खोज्ने प्रयासमा जुटेका छन्, तर सम्भव देखिएको छैन । नोवेल कोरोना भाइरस हावाबाट पनि सर्छ । सरुवा रोग जस्तै हो । यो रोगले चीनलाई घेरिसेको थियो । चीनमा धेरै विदेशीहरु पनि । नयाँ भाइरस पत्ता लागेपछि सबै आफ्नो ज्यान जोगाउन आफ्नै देश फर्किएँ । ती फर्किए, मानिसहरुले नै आफ्नो देशमा भाइरसले ल्याए । वल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले इन्टरनेशनल इम्र्जेसी घोषित गर्यो । नेपालबाट चीनमा पढ्न गएका विद्यार्थीहरुलाई नेपालले फर्कायो । चीनमा मात्रै हैन सबै देशहरुबाट नेपालले आफ्नो जनतालाई नेपाल फर्कायो । प्रवासमा अलपत्र परेका मानिस देशमा त आए विडम्बना देशलाई सुरक्षित राख्न सकेनन् ।
नेपाल सरकारले चैत ११ गते लकडाउन घोषित गर्यो । सबै आफ्नै घरहरुमा थुनिए । पहिला बाटोतिर हिड्नेहरु अब आफ्नाआफ्ना घरका छतमा हिड्न थाले । स्कुलका विद्यार्थीहरुको मासिक परीक्षा सक्कीसकेको थियोे । १० कक्षाको सीइइ बाहेक । लकडाउनमा त्यसरी कोही बसेका थिएनन होला । आफ्नै घरमा पिंजडाको सुगा जसरी कसलाई नै मन पर्यो र धेरै मान्छेहरु गाउँतिर लागे । हावाबाट सर्ने यो रोग एउटै बसमा ४० जना कोचिए पछि किन नसर्नु ? आफ्नै घरबस्नेहरु गाउँतिर लागे । सडकमा बस्नेहरु कता लुके थाहा छैन । सरकारले राहत पन बाढिरहेको थियो । त्यसरी नै लकडाउनमा बस्दा व्यापारीहरु डुबिरहेका थिए । राहत बाड्ने काम भने राम्रा नै गरे । अरुहरु त जसरीत्यसरी बस्लान् ती सडकमा बसेका, डोका नाङ्गोहरु बच्नेहरु र सानासाना पसलहरुले पैसा कसरी कमाउनु ?
त्यसैले पनि पसलहरु समय मिलाएर खोल्न दिएकै थिए । औषधी पसलहरु भने दिनभरि खोल्न दिन्थे । अझ पनि औषधी खुलेको छैन । बैंकहरु पनि खुलेका छैन ।
विद्यालय नखुलेपनि प्राइभेट स्कुलहरुले अनलाइन क्लास सुरु गरेका थिए । तर सरकारले भने अनलाइन कक्षाको शुल्क अभिभावहरुसँग नलिनु भनेर भनेको थियो । जे भनेपनि अनलाइन कक्षाका लागि शिक्षकहरुलाई अलि धेरै काम गर्नुपर्छ । स्लाइडहरु बनाउन पनि समय लाग्छ । अनि दिनदिन कक्षा भएपछि भ्याउने पनि कसरी ? फेरि शिक्षकले घरको नेट स्लो भन्यो भने काम सिदियो । अनलाइन क्लासमा सबैले राम्रोसँग सबैले राम्रो पढ्न पाउने चहिँ होइन । अब सबैैको घरमा मोवाइल ल्यापटप त छैन । मोवाइल ल्यापटप भएकोले पनि नेट हुनै पर्छ भन्ने छ र ? नेट छैन भने डाटा प्याक सिदियो भने ? अघि क्लास मात्र पढेर भएन जसो त्यसो गरेर पनि पढिरहेको बेलामा अनलाइन क्लास बन्द भयो । अब सरकारले अनलाइन क्लासको पैसा नदिने भनेर सुनियो ।
अलिअलि गर्दै लकडाउन खुकुलो भई रहेका थिए । साझा बसहरु, टेम्पोहरु चल्न थाल्यो । तर एक सिटमा एक जना मात्र बस्ने रे । अनि बस भाडा भने दुगुना गरेको रहेछ । के महंगी बढाएर सार्वजनिक बस चलाउँदैमा यो देशमा कोरोना हट्ला त ?
प्रकाशित मिति २५ श्रावण २०७७, आईतवार ०८:२६